ENTREPRISE : KIS MADAGASCAR - CULTURE & PAIX - TVMADA - RADIOMADA
Orinasa manome fanampiana ireo izay mila izany ny orinasa Kis Madagascar. Maro mantsy ireo orinasa lehibe no mila fanampiana amin’ny resaka serasera, amin’ny fampahafantarana azy na amin’ny alalan’ny hetsika na amin’ny resaka internety.
Ny Kis Madagascar dia misehatra eo amin’ny resaka fanampiana, famolavolana hevitra, fampandrosoana, fananganana tetik’asa, fanatsarana, fanentanana, fampiofanana,sns… Izany hoe manampy ny orinasa amin’ny fampivoarana azy, amin’ny fampahafantarana azy ireo, amin’ny fampiofanana ireo mpiasa ao aminy. Anisan’izany ohatra ny BFV SG, ny orinasa STAR…
Hisy ny fampahafantarana ny asan’ny orinasa Kis Madagascar ato ho ato, hisy ny hetsika hataon’ny Kis Madagascar ka amin’ny alalan’ny “internet” no hahalalana ny anjara asan’ny orinasa tsirairay izay ny Kis Madagascar no namolavola ity hetsika ity. Hisy ny famoronana pejy manokana amin’ny “site internet” ka hita ao anatin’io pejy io avokoa ny mahakasika ilay orinasa, ny fiasany, ny mampiavaka azy, ny toetoetrany,sns…
Mitondra ny lohanteny hoe “Salon de la Culture et Paix” ity hetsika ity. Hisy ihany koa ny fifaninanana hahazoana loka ka ao anatin’ilay “site” ihany no misy ny fifidianana ary afaka mandray anjara daholo ny olon-drehetra.
Lot II N 19 Bis – Antsakaviro
Tel Madagascar : +261 (0) 34 11 611 98 / +261 (0) 33 41 611 98